ဘာကွောငျ့ အရညျအခငျြးမရှိသူတှကေ ကိုယျ့ကိုယျ ကို အံ့မခနျးထူးခြှနျတယျလို့ထငျရတာလဲ?
သငျက သငျ့ကိုယျသငျထငျသလောကျအရာရာတိုငျးမှာ ကြှမျးကငျြမှုရှိရဲ့လား။
သငျဟာ ပိုကျဆံကို စီမံခနျ့ခှဲ ကိုငျတှယျတဲ့နရောမှာ ဘယျလောကျတျောသလဲ?
လူတှရေဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ဖတျတဲ့ နရောမှာရော သငျ့ကိုယျသငျ တျောတယျလို့ထငျလား?
ဘာသာစကားတှမှော သာမနျထကျပိုကောငျးသလား ?
ကိုယျ့ကြှမျးကငျြတဲ့ပညာက တခွားလူတှနေဲ့ ဘယျလို နှိုငျးယှဉျလို့ရလဲသိခွငျးက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တနျဖိုးထားမှုကို မွှငျ့တငျပေးတာထကျကို ပိုပါတယျ။
ဘယျအခြိနျမှာတော့အကွံဉာဏျတောငျးဖို့လိုသလဲ ဆိုတာကို နားလညျနိုငျအောငျ ကူညီပေးနိုငျတယျ။
ဒါပမေယျ့ စိတျပညာသုတသေနက ညှနျပွတာက ကြှနျတျောတို့ဟာကိုယျ့ကိုယျကိုယျတိတိကကြ သုံးသပျတဲ့နရောမှာ သိပျမကောငျးကွတာတှရေ့ပါတယျ။
တကယျတမျးကြှနျတျောတို့က ကိုယျ့အရညျအခငျြးကို မကွာခဏ အမှနျတကယျရှိတာထကျပိုပွီး အထငျကွီးမိတတျကွပါတယျ။ သုတသေီတှကေဒီဖွဈစဉျကို Dunning-Kruger သကျရောကျမှုလို့နာမညျပေးထားကွပါတယျ။
ဒီသကျရောကျမှုက ဘာကွောငျ့ လလေ့ာမှုအရ လူဦးရေ ၁၀၀ ကြျောက လူတှမှော ကိုယျ့ကိုယျကို သာလှနျကောငျးမှနျတယျလို့အထငျမှားမှု လက်ခဏာပွသတယျဆိုတာကို ရှငျးပွတယျ။
ကြှနျတျောတို့က ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သူမြားထကျ တျောတယျလို့ ထငျမွငျအကဲဖွတျတတျကွတယျ။ သင်ျခြာနိယာမတှကေို သှဖေယျဆနျ့ကငျြတဲ့အထိပါပဲ။
ကုမ်ပဏီနှဈခုကဆေျာ့ဖျဝဲလျအငျဂငျြနီယာတှကေို သူတို့စှမျးဆောငျမှုကို အကဲဖွတျခိုငျးတဲ့အခါ ကုမ်ပဏီတဈခုက အငျဂငျြနီယာ ၃၂% နဲ့ နောကျတဈခုက ၄၂% က သူတို့ကိုယျသူတို့ အတျောဆုံး ၅% ထဲထညျ့ကွတယျ။
နောကျလလေ့ာမှုတဈခုမှာ အမရေိကနျကားမောငျးသူ ၈၈% က သူတို့ကိုယျသူတို့ သာမနျ(ပမျြးမြှ)ထကျပိုတဲ့ ကားမောငျးကြှမျးကငျြမှုရှိတယျလို့ပွောကွတယျ။
ဒါတှကေ သီးခွားတှရှေိ့ခကျြတှမေဟုတျပါဘူး။ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ လူတှကေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အမြားစုထကျ ပိုတျောတယျလို့ အကဲဖွတျလရှေိ့တယျ။
ကနျြးမာရေး၊ဦးဆောငျမှု၊ အရညျအခငျြး၊ ကငျြ့ဝတျ ကစပွီး အခွားပညာရပျတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
ထူးထူခွားခွား စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာက အရညျအခငျြးအနိမျ့ဆုံးသူတှကေ ပိုပွီး မကွာခဏ သူတို့ကြှမျးကငျြမှုကိုအကွီးဆုံးအတိုငျးတာထိ ပိုအထငျကွီးဖို့ဖွဈနိုငျခွအေရှိဆုံးဖွဈတယျလို့သုတသေီတှကေပွောကွပါတယျ။
သိသိသာသာ ညံ့ဖငျြးတဲ့သူတှကေ အကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ တှေးချေါမှု၊ သဒ်ဒါ၊ ငှေးကွေးဆိုငျရာ ဗဟုသုတ၊ သင်ျခြာ၊ စိတျခံစားမှု၊ ဉာဏျရညျဉာဏျသှေး ဆေးပညာဆိုငျရာဓာတျခှဲဆေးစဈခကျြမြား လုပျဆောငျခွငျးနဲ့
စဈတုရငျ ကစားနညျး စတာတှမှော သူတို့ရဲ့ကြှမျးကငျြမှုကို တကယျ့ပညာရှငျတှေ နီးပါး ကောငျးတယျလို့ အကဲဖွတျလရှေိ့ကွပါတယျ။
ဒီတော့ ဘယျသူတှကေ ဒီအထငျမှားမှုကို ခုခံနိုငျမှုအနညျးဆုံးလဲ?
ဝမျးနညျးစရာကတော့ အဖွကေ ကြှနျတျောတို့အားလုံးပါပဲ... အကွောငျးက ကြှနျတျောတို့အားလုံးမှာ မကြှမျးကငျြတဲ့ အရာတှရှေိနလေို့ပါပဲ ….ကြှနျတျောတို့ သတိမထားမိတတျကွပါဘူ။
စိတျပညာရှငျမြား ဖွဈကွတဲ့ Dunning နဲ့ Kruger တို့က ဒီသကျရောကျမှုကို ၁၉၉၉မှာ ပထမဆုံးဖျောပွခဲ့တယျ။ သီးခွားနယျပယျတှမှော အသိပညာ နဲ့ ကြှမျးကငျြမှု မရှိတဲ့သူတှကေ နှဈဆကံဆိုးတယျလို့ သူတို့ကပွောခဲ့တယျ။
ပထမဆုံး ညံ့ဖငျြးသူတှကေ အမှားတှလေုပျပွီး ဆုံးဖွတျခကျြအလှဲတှေ လုပျတတျကွတယျ။
ဒုတိယက သူတို့ရဲ့ အဲ့ဒီအသိပညာ ကှာဟမှုတှကေပဲ သူတို့ရဲ့အမှားတှကေိုမတှမေိ့အောငျဟနျ့တားတယျ။
တနညျးပွောရရငျတော့ စှမျးဆောငျရညျညံ့သူတှကေ သူတို့ ဘယျလောကျ ဆိုးဝါးစှာလုပျဆောငျနတောကို သိဖို့ လိုအပျတဲ့ ကြှမျးကငျြမှု ကငျးမဲ့တယျ.. အားနညျးတယျပေါ့။
ဥပမာအားဖွငျ့ သုတသေီတှကေ ကောလိပျစကားရညျလုပှဲ ယှဉျပွိုငျသူတှကေို လလေ့ာတဲ့အခါမှာ လကျရညျစမျးပှဲအခြီရဲ့ အောကျဆုံး ၂၅% ကအသငျးတှကေ ၅ ပှဲမှာ ၄ ပှဲလောကျနီးနီး ရှူံးကွတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူတို့က သူတို့ ၆၀% လောကျ နိုငျတယျလို့ ထငျခဲ့ကွတယျ။
စကားရညျလုပှဲရဲ့ စညျးမဉျြးတှကေို သခြောနားလညျမှုမရှိဘဲ ကြောငျးသားတှကေ ဘယျအခြိနျနဲ့ဘယျလောကျမကွာခဏ သူတို့ရဲ့ ခပြေခကျြက ပွိုလဲသှားတယျဆိုတာ မသိနိုငျကွဘူး။
ပွောခငျြတာက Dunning-Kruger သကျရောကျမှုက အတ်တကွောငျ့ အားနညျးခကျြတှကေိုမမွငျစတေဲ့ပွဿနာလဲမဟုတျနပွေနျပါဘူး။ လူတှကေ သူတို့ခြို့ယှငျးခကျြတှကေို တှသှေ့ားတဲ့အခါ တကယျတမျး တော့ လကျခံတတျကွပါတယျ။
လလေ့ာမှုတဈခုမှာ ယုတ်တိဗဒေ ဉာဏျစမျးကို အစမှာ မဖွနေိုငျခဲ့တဲ့ကြောငျးသားတှကေ ယုတ်တိဗဒေဘာသာရပျ သငျတနျးတိုတဈခု တကျပွီးသှားခြိနျမှာတော့ သူတို့ မူလအဖွတှေကေို အလှနျဆိုးဝါးတယျလို့ သတျမှတျဖို့ အလှနျလိုလိုလားလားရှိကွပါတယျ။
ဒီအကွောငျးကွောငျ့ပဲ အတှအေ့ကွုံ (သို့) ကြှမျးကငျြမှု အသငျ့အတငျ့ရှိသူတှကေ မကွာခဏ သူတို့အရညျအခငျြးကို ယုံကွညျမှုပိုနညျးတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အတျောအတနျသိထားတဲ့အတှကျ သူတို့မသိသေးတာ အမြားကွီးရှိမှနျးသိထားတယျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေ သူတို့ဘယျလောကျနှံ့စပျ သလဲဆိုတာ သိကွတယျ။
ဒါပမေယျ့ သူတို့ကတော့ အခွားအမှားတဈခုကို မကွာခဏ လုပျတတျကွပါသေး တယျ။အဲ့ဒါကတော့ သူတို့က တခွားသူတှကေိုလညျး သူတို့လောကျနှံစပျတယျလို့ ယူဆထားတယျ။
ရလဒျကတော့ မပိုငျနိုငျသညျဖွဈစေ အလှနျကြှမျးကငျြသညျဖွဈစေ လူတိုငျးက မမှနျကနျတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျအမွငျ ပူဖောငျးထဲမှာ မကွာခဏပိတျမိနကွေတာပဲ။
မကြှမျးကငျြတဲ့အခါ သူတို့ကိုယျတိုငျရဲ့ အပွဈကို ပွနျမမွငျနိုငျဘူး။ အလှနျထူးခြှနျပွနျတော့လဲ သူတို့ရဲ့အရညျအခငျြးက ဘယျလောကျ သူမတူသလဲဆိုတာ သတိမထားမိကွဘူး။
ဒီတော့ Dunning-Kruger သကျရောကျမှုက ခံစားနရေတဲ့သူတှအေတှကျ မမွငျသာဘူးဆိုရငျ အရာအမြိုးမြိုးမှာ သငျဘယျလောကျတတျကြှမျးသလဲ ဆိုတာကို သိအောငျဘယျလိုလုပျလို့ရသလဲ?
ပထမဆုံး အခွားသူတှဆေီက အမွငျကိုတောငျးပါ။ ပွီးတော့ နားဝငျမခြိုရငျတောငျမှ သုံးသပျပါ။
ဒုတိယနဲ့ ပိုအရေးကွီးတာက ဆကျပွီးလလေ့ာသငျယူပါ။ ပိုပွီး အသိပညာတိုးလာရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျမှာ မမွငျနိုငျတဲ့ အပေါကျတှရှေိဖို့ ဖွဈနိုငျခွနေညျးပါတယျ။
အခုဖျောပွပေးခဲ့တာကတော့ စိတျပညာအရ အရညျအခငျြးမရှိသူတှဟော ဘာကွောငျ့ သူတို့ကိုယျသူတို့ ပိုတျောတယျ.. ကြှမျးကငျြတယျလို့ထငျရလလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာဖွဈပါတယျ။ ဒီစာပုဒျလေးမှာ စာဖတျသူအနနေဲ့ ပွောခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာကို နားလညျသဘောပေါကျကွမယျလို့ထငျမိပါတယျ။ ပွောခငျြတာကတော့ မိမိလကျရှိရောကျနတေဲ့ နရောမှာ ရပျမနပေဲ ပိုအောငျမွငျတဲ့ ခရီးကိုလြောကျလှမျးနိုငျဖို့ ဒီထကျပိုပွီး လလေ့ာသငျယူကွပါလို့ပွောခငျြပါတယျ။
ဘာကြောင့် အရည်အချင်းမရှိသူတွေက ကိုယ့်ကိုယ် ကို အံ့မခန်းထူးချွန်တယ်လို့ထင်ရတာလဲ?
သင်က သင့်ကိုယ်သင်ထင်သလောက်အရာရာတိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရဲ့လား။
သင်ဟာ ပိုက်ဆံကို စီမံခန့်ခွဲ ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်လောက်တော်သလဲ?
လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဖတ်တဲ့ နေရာမှာရော သင့်ကိုယ်သင် တော်တယ်လို့ထင်လား?
ဘာသာစကားတွေမှာ သာမန်ထက်ပိုကောင်းသလား ?
ကိုယ့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာက တခြားလူတွေနဲ့ ဘယ်လို နှိုင်းယှဉ်လို့ရလဲသိခြင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှုကို မြှင့်တင်ပေးတာထက်ကို ပိုပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာတော့အကြံဥာဏ်တောင်းဖို့လိုသလဲ ဆိုတာကို နားလည်နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် စိတ်ပညာသုတေသနက ညွှန်ပြတာက ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိတိကျကျ သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ သိပ်မကောင်းကြတာတွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်အရည်အချင်းကို မကြာခဏ အမှန်တကယ်ရှိတာထက်ပိုပြီး အထင်ကြီးမိတတ်ကြပါတယ်။ သုတေသီတွေကဒီဖြစ်စဉ်ကို Dunning-Kruger သက်ရောက်မှုလို့နာမည်ပေးထားကြပါတယ်။
ဒီသက်ရောက်မှုက ဘာကြောင့် လေ့လာမှုအရ လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော်က လူတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သာလွန်ကောင်းမွန်တယ်လို့အထင်မှားမှု လက္ခဏာပြသတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူများထက် တော်တယ်လို့ ထင်မြင်အကဲဖြတ်တတ်ကြတယ်။ သင်္ချာနိယာမတွေကို သွေဖယ်ဆန့်ကျင်တဲ့အထိပါပဲ။
ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကဆော့်ဖ်ဝဲလ်အင်ဂျင်နီယာတွေကို သူတို့စွမ်းဆောင်မှုကို အကဲဖြတ်ခိုင်းတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အင်ဂျင်နီယာ ၃၂% နဲ့ နောက်တစ်ခုက ၄၂% က သူတို့ကိုယ်သူတို့ အတော်ဆုံး ၅% ထဲထည့်ကြတယ်။
နောက်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ အမေရိကန်ကားမောင်းသူ ၈၈% က သူတို့ကိုယ်သူတို့ သာမန်(ပျမ်းမျှ)ထက်ပိုတဲ့ ကားမောင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။
ဒါတွေက သီးခြားတွေ့ရှိချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အများစုထက် ပိုတော်တယ်လို့ အကဲဖြတ်လေ့ရှိတယ်။
ကျန်းမာရေး၊ဦးဆောင်မှု၊ အရည်အချင်း၊ ကျင့်ဝတ် ကစပြီး အခြားပညာရပ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ထူးထူခြားခြား စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက အရည်အချင်းအနိမ့်ဆုံးသူတွေက ပိုပြီး မကြာခဏ သူတို့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအကြီးဆုံးအတိုင်းတာထိ ပိုအထင်ကြီးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့သုတေသီတွေကပြောကြပါတယ်။
သိသိသာသာ ညံ့ဖျင်းတဲ့သူတွေက အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် တွေးခေါ်မှု၊ သဒ္ဒါ၊ ငွေးကြေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ သင်္ချာ၊ စိတ်ခံစားမှု၊ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး ဆေးပညာဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲဆေးစစ်ချက်များ လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့
စစ်တုရင် ကစားနည်း စတာတွေမှာ သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို တကယ့်ပညာရှင်တွေ နီးပါး ကောင်းတယ်လို့ အကဲဖြတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒီတော့ ဘယ်သူတွေက ဒီအထင်မှားမှုကို ခုခံနိုင်မှုအနည်းဆုံးလဲ?
ဝမ်းနည်းစရာကတော့ အဖြေက ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါပဲ... အကြောင်းက ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ မကျွမ်းကျင်တဲ့ အရာတွေရှိနေလို့ပါပဲ ….ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိတတ်ကြပါဘူ။
စိတ်ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ Dunning နဲ့ Kruger တို့က ဒီသက်ရောက်မှုကို ၁၉၉၉မှာ ပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့တယ်။ သီးခြားနယ်ပယ်တွေမှာ အသိပညာ နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိတဲ့သူတွေက နှစ်ဆကံဆိုးတယ်လို့ သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။
ပထမဆုံး ညံ့ဖျင်းသူတွေက အမှားတွေလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အလွဲတွေ လုပ်တတ်ကြတယ်။
ဒုတိယက သူတို့ရဲ့ အဲ့ဒီအသိပညာ ကွာဟမှုတွေကပဲ သူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုမတွေ့မိအောင်ဟန့်တားတယ်။
တနည်းပြောရရင်တော့ စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့သူတွေက သူတို့ ဘယ်လောက် ဆိုးဝါးစွာလုပ်ဆောင်နေတာကို သိဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု ကင်းမဲ့တယ်.. အားနည်းတယ်ပေါ့။
ဥပမာအားဖြင့် သုတေသီတွေက ကောလိပ်စကားရည်လုပွဲ ယှဉ်ပြိုင်သူတွေကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ လက်ရည်စမ်းပွဲအချီရဲ့ အောက်ဆုံး ၂၅% ကအသင်းတွေက ၅ ပွဲမှာ ၄ ပွဲလောက်နီးနီး ရှူံးကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့က သူတို့ ၆၀% လောက် နိုင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။
စကားရည်လုပွဲရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို သေချာနားလည်မှုမရှိဘဲ ကျောင်းသားတွေက ဘယ်အချိန်နဲ့ဘယ်လောက်မကြာခဏ သူတို့ရဲ့ ချေပချက်က ပြိုလဲသွားတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ကြဘူး။
ပြောချင်တာက Dunning-Kruger သက်ရောက်မှုက အတ္တကြောင့် အားနည်းချက်တွေကိုမမြင်စေတဲ့ပြဿနာလဲမဟုတ်နေပြန်ပါဘူး။ လူတွေက သူတို့ချို့ယွင်းချက်တွေကို တွေ့သွားတဲ့အခါ တကယ်တမ်း တော့ လက်ခံတတ်ကြပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ ယုတ္တိဗေဒ ဥာဏ်စမ်းကို အစမှာ မဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေက ယုတ္တိဗေဒဘာသာရပ် သင်တန်းတိုတစ်ခု တက်ပြီးသွားချိန်မှာတော့ သူတို့ မူလအဖြေတွေကို အလွန်ဆိုးဝါးတယ်လို့ သတ်မှတ်ဖို့ အလွန်လိုလိုလားလားရှိကြပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲ အတွေ့အကြုံ (သို့) ကျွမ်းကျင်မှု အသင့်အတင့်ရှိသူတွေက မကြာခဏ သူတို့အရည်အချင်းကို ယုံကြည်မှုပိုနည်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အတော်အတန်သိထားတဲ့အတွက် သူတို့မသိသေးတာ အများကြီးရှိမှန်းသိထားတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက သူတို့ဘယ်လောက်နှံ့စပ် သလဲဆိုတာ သိကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ အခြားအမှားတစ်ခုကို မကြာခဏ လုပ်တတ်ကြပါသေး တယ်။အဲ့ဒါကတော့ သူတို့က တခြားသူတွေကိုလည်း သူတို့လောက်နှံစပ်တယ်လို့ ယူဆထားတယ်။
ရလဒ်ကတော့ မပိုင်နိုင်သည်ဖြစ်စေ အလွန်ကျွမ်းကျင်သည်ဖြစ်စေ လူတိုင်းက မမှန်ကန်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အမြင် ပူဖောင်းထဲမှာ မကြာခဏပိတ်မိနေကြတာပဲ။
မကျွမ်းကျင်တဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အပြစ်ကို ပြန်မမြင်နိုင်ဘူး။ အလွန်ထူးချွန်ပြန်တော့လဲ သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းက ဘယ်လောက် သူမတူသလဲဆိုတာ သတိမထားမိကြဘူး။
ဒီတော့ Dunning-Kruger သက်ရောက်မှုက ခံစားနေရတဲ့သူတွေအတွက် မမြင်သာဘူးဆိုရင် အရာအမျိုးမျိုးမှာ သင်ဘယ်လောက်တတ်ကျွမ်းသလဲ ဆိုတာကို သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသလဲ?
ပထမဆုံး အခြားသူတွေဆီက အမြင်ကိုတောင်းပါ။ ပြီးတော့ နားဝင်မချိုရင်တောင်မှ သုံးသပ်ပါ။
ဒုတိယနဲ့ ပိုအရေးကြီးတာက ဆက်ပြီးလေ့လာသင်ယူပါ။ ပိုပြီး အသိပညာတိုးလာရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ မမြင်နိုင်တဲ့ အပေါက်တွေရှိဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါတယ်။
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ စိတ်ပညာအရ အရည်အချင်းမရှိသူတွေဟာ ဘာကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပိုတော်တယ်.. ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ထင်ရလလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာပုဒ်လေးမှာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို နားလည်သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ မိမိလက်ရှိရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ ရပ်မနေပဲ ပိုအောင်မြင်တဲ့ ခရီးကိုလျောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဒီထက်ပိုပြီး လေ့လာသင်ယူကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
Ref : https://www.ted.com/talks/david_dunning_why_incompetent_people_think_they_re_amazing/transcript?language=my#t-18304
Read times Last modified on Wednesday, 05 February 2020 15:13
Email :: [email protected]mrdpub.com